I-Apple ishelfu isicwangciso sayo esinempikiswano sokuskena ii-iPhones zabucala kwiifoto ezingekho mthethweni
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Amalungelo abantu » I-Apple ishelfu isicwangciso sayo esinempikiswano sokuskena ii-iPhones zabucala kwiifoto ezingekho mthethweni
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • ulwaphulo-mthetho • Education • ukonwatyiswa • Iindaba zikaRhulumente • Amalungelo abantu • iindaba • abantu • Xanduva • Safety • Technology • Tourism • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba zase-USA ezaphulayo • Iindaba ezahlukeneyo
Nabasebenzi beApple bavakalise inkxalabo ngetekhnoloji yokufumanisa, bexhalabile ukuba inokusetyenziselwa ukusebenza malunga nokukhusela ngokufihlakeleyo, ukuba inokuchonga ngokulula kwaye ifake ezinye iifoto.
I-Apple yokulibazisa ukuskena okungafunekiyo kwe-iPhone.
Ukuskena iApple kuya kujonga izinto zokuxhatshazwa kwabantwana ngokwesondo.
Amatshantliziyo kunye namaqela alungileyo abonisa inkxalabo malunga nokunyanzelwa kunye nemicimbi yabucala.
Isibhengezo sika-Apple esandula ukubangundaba-mlonyeni sezicwangciso zokuskena zonke ii-iPhones zabucala zeefoto kunye neencoko ezinokubandakanya izinto zokuxhatshazwa kwabantwana ngokwesondo (CSAM) kwahlangatyezwana nazo ngokukhawuleza ngeefowuni zokuyeka izicwangciso zamaqela oluntu, kubandakanya ne-American Civil Liberties Union (ACLU).
Emva kwengxoxo yokugxekwa eyalandela isibhengezo, u-Apple ubhengeze ukuba "uzakuthatha ixesha elongezelelekileyo" kwiinyanga ezizayo ukuba asebenze kwizicwangciso zokuphawula i-CSAM, phakathi kwenkxalabo evela kubaphembeleli kunye namaqela amalungelo malunga nokunyanzelwa kunye nemicimbi yabucala.
"Ngokusekwe kwingxelo evela kubathengi, amaqela enkxaso, abaphandi kunye nabanye, sithathe isigqibo sokuthatha ixesha elongezelelekileyo kwezi nyanga zizayo ukuqokelela igalelo kunye nokwenza uphuculo ngaphambi kokukhupha ezi zinto zibaluleke kakhulu zokhuseleko lwabantwana," iapile Isithethi sithethe kwingxelo namhlanje.
Itekhnoloji yeApple iya kuskena iPhone Iifoto kunye neencoko ze-CSAM, kusetyenziswa inkqubo inkampani eyayibanga ukuba ibizakukhusela imfihlo yomntu ngenxa yokuba itekhnoloji ayichongi iinkcukacha zomfanekiso okanye incoko, okanye kufuneka ubenayo nokuba-nangona abagxeki abaninzi beveze ukungathandabuzeki kwabo.
Inkqubo isebenzisa uvimba weenkcukacha okanye 'ii-hashtags zemifanekiso' ukwazisa umxholo othile oza kuphawulwa, nangona iingcali zezokhuseleko zilumkisile ukuba ezo teknoloji zinokuphathwa gwenxa, okanye imifanekiso emsulwa inokutolikwa gwenxa.
Nabasebenzi beApple bavakalise inkxalabo ngetekhnoloji yokubhaqa, bexhalabile ukuba ingasetyenziselwa ukusebenza malunga nokukhusela ngokufihlakeleyo, ukuba inokuchonga ngokulula kwaye ifake ezinye iifoto- okanye nokuba abanye oorhulumente bangayixhaphaza bafumane ezinye izinto. I-Apple igcina ukuba iyakwala naziphi na izicelo ezivela koorhulumente zokusebenzisa le nkqubo yayo nantoni na engeyiyo imifanekiso yokuxhatshazwa kwabantwana.
"Imessages ayisayi kuphinda inikeze ukugcinwa kwemfihlo nokuba ngasese kwabo basebenzisi ngenkqubo yemiyalezo ebetheliweyo ukuya esiphelweni apho kuphela umthumeli kunye nabamkeli ekujoliswe kubo abanokufikelela kulwazi oluthunyelweyo," ifunde incwadi evela kumdibaniselwano wamaqela angama-90 omzabalazo kwi-Apple CEO uTim Cook malunga notshintsho olunokubakho.
Ixesha elichanekileyo lokulibaziseka okwangoku alaziwa, kodwa inkqubo entsha yokubhaqa yayijolise ekuqaleni ukuba isetyenziswe ngamanye amaxesha kulo nyaka.